တက္ကစီ ကားဆရာ – Hlataw.com
ကိုမောင်လေးစိတ်တွေကြွနေသည်။ စိတ်တွေကြွရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းအရင်းက သူ့တူတစ်ယောက်ဆီက စလာတဲ့ပြဿနာ…။ အင်တာနက်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး သူ့ဖုန်းထဲကို ထည့်ထည့်ပေးတတ်သည်။ အဲဒီမှ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ သူလည်း ဇာတ်လမ်းထဲက တက္ကစီသမားတွေကို အားကျလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ လန်ဒန်တက္ကစီကားဆရာတွေက ကောင်မလေးငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ ကားလာငှားစီးရင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ဖန်ပြီး လိုးကြသည်။ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရင်းသူလည်းပဲ ရုပ်ရှင်ထဲကလိုလုပ်ချင်လာသည်။
ဇာတ်လမ်းထဲကလို လုပ်ဖို့ဆိုရင် သူ့တက္ကစီကို နည်းနည်းတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်။ အများကြီးတော့မဟုတ် ..။ သူ့ ပရိုဘောက်စ်ကို မှန်အမဲရောင်စတစ်ကာကပ်တာရယ်၊ စပိုင်ကင်မရာနှစ်လုံးကို ရှေ့တစ်လုံးနောက်တစ်လုံး တပ်တာရယ်၊ ဒရိုင်ဘာဘက်က လော့ချထားရင် ပါစင်ဂျာတံခါးက ဖွင့်လို့မရအောင် ပြုလုပ်ရတာရယ်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်တောင်မပေါ်သေး ကိုမောင်လေးအိတ်ထဲက ပိုက်ဆံ နှစ်ပုံးလောက်ထွက်သွားချေပြီ။ ဒီနေ့အားလုံးအဆင်သင့် ပြုပြင်ပြီးလို့ စမ်းကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေသည်။ ကိုမောင်လေး နေ့လည်စာ စားပြီးလို့ အပြင်ကိုထွက်… လမ်းထိပ်နားရောက်ရုံရှိသေး ခပ်လန်းလန်းစော်ကြီးတစ်ဗွေ ကားတားစီးသည်။
စော်ကြီးက ရင်မောက်မောက်ဖင်ကောက်ကောက်နဲ့ ကိုမောင်လေးအတွက် ပစ်မှားချင်စရာအတိ…။ အဖြူရောင်ကိုယ်ကျပ်ရှပ်အကျီပေါ်က အနက်ရောင် ကုတ်အကျီတစ်ထည်ထပ်ဝတ်ထားသည်။ အောက်မှာက ဒူးအထက်နားရောက်တဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ်စကတ်တို ဝတ်ထားပြီး ပေါင်သားကြီးနှစ်လုံးက ဖြောင့်စင်းပြီး စကတ်နဲ့ တုတ်နေသည်။ အသားဖြူသူမို့ ပေါင်သားတွေက ဖြူဖွေးနေသည်။ ကားပေါ်ကို တက်တော့ စကတ်အတိုမို့ ပေါင်အတွင်းသားတွေကိုလည်း လျှပ်တပြက်တွေ့လိုက်ရသေးသည်။
အင်း…. ဒီစော်ကြီးတော်တော်တောင့်တာပဲ။ ကိုမောင်လေးစိတ်ထဲကနေပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စော်ကြီးကို လိုက်ပို့ရမဲ့ခရီးက နည်းနည်းတော့ဝေးသည်။ လူလည်းနည်းနည်းရှင်းတဲ့ နေရာသွားရမှာမို့ ဇာတ်လမ်းထဲကလို လုပ်ချင်နေတဲ့ ကိုမောင်လေးတစ်ယောက် ရင်တွေခုန်နေသည်။ ဒူးတွေတောင် ယိုင်မလားပဲ။ ”အမကြီးက ဘဏ်မှာလုပ်တာလား။” ကိုမောင်လေး စကားစကြည့်လိုက်သည်။ ”မဟုတ်ဘူး။ ဘဏ်မှာချေးငွေလာထုတ်တာ။ အစ်မက ကိုယ်ကာယနည်းပြလေ။ ကိုယ်ပိုင် ဂျင် စင်တာလေးတစ်ခုထောင်ချင်လို့။” ”အော်…. ” ကိုမောင်လေး သံယောင်လိုက်ရင်း စိတ်ထဲကနေတွေးနေမိသည်။
ဒီစော်ကြီး ဖင်တွေ ရင်တွေ တောင့်တာလည်း မပြောနဲ့ ကာယအလှနည်းပြကိုး…။ ကိုမောင်လေးတစ်ယောက် စော်ကြီးရဲ့ နို့ထွားထွားကြီးတွေကို ဆွဲညှစ်ရင်း ဖင်လုံးလုံးကောက်ကောက်ကြီးတွေကို တဖန်းဖန်းဆောင့်လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေရသည်။ ”ဘဏ်မှာလူတွေရှုပ်တယ်နော်အမ။” ကိုမောင်လေး စော်ကြီးနဲ့ စကားစမပြတ်အောင် ကြိုးစားနေသည်။ ”ဟုတ်တယ်။ အစ်မတောင် မနက်ကတည်းကတန်းစီနေရတာနဲ့ နေ့လည်စာတောင်မစားရသေးဘူး။” ”ဟုတ်လားအစ်မ။ ထမင်းဆိုင်တစ်ခုခုမှာရပ်ပေးရမလား။” ”ရတယ်။ မုန့်စားထားတယ်။ ဗိုက်မဆာဘူး။ အခုလောလောဆယ် ဗိုက်ဆာတာထက် အပေါ့သွားချင်နေလို့။ ဒီနားမှာအပေါ့သွားလို့ ရတဲ့နေရာရှိမလားမသိဘူး။” ”ဟိုးရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့လူရှင်းတယ်အစ်မ။ ကျွန်တော်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။” ”ကျေးဇူးပဲကွာ…။ ” နောက်ကြည့်မှန်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ စော်ကြီး ဆီးခုံနေရာကို လက်နဲ့အသာအုပ်ထားတာတွေ့သည်။ စော်ကြီးတော်တော်လေးကို သေးပေါက်ချင်နေပုံရသည်။ လမ်းချိုးတစ်ခုထဲချိုးဝင်လိုက်သည်။
အစိုးရရုံးတွေရှိတဲ့လမ်းမို့ လူသွားလူလာရှင်းသည်။ ”အစ်မ ရပြီ။ ကားတံခါးနဲ့ကွယ်ပြီး ကားဘေးမှာပဲ သွားလိုက်ပါ။” စော်ကြီး လမ်းဘေးဘက်က တံခါးဖွင့် ၊ ကားတံခါးနဲ့ကွယ်ပြီး သေးပေါက်သည်။ ကိုမောင်လေးလည်း ကားတံခါးကို အသာဖွင့်ပြီး ဖုနုးကင်မရာနဲ့ စော်ကြီးသေးပေါက်တာကိုရိုက်ထားလိုက်သည်။ ”ဟေ့….။ နင်… ငါသေးပေါက်တာကိုဘာလို့ချောင်းရိုက်နေတာလဲ။” လက်တစ်ဖက်ကို ကားအောက်ချရင်း ခိုးရိုက်နေတဲ့ ကိုမောင်လေး တစ်ချက်တော့လန့်သွားသည်။ ”ဘယ်မှာရိုက်လို့လဲဗျ။” ”အောင်မာ…..။ ငါကိုယ်တိုင် ငါ့မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်တာတောင် ငြင်းချင်သေးတယ်။ ပြန်ဖျက်ပေး။ နင်ရိုက်ထားတာကို။” ” မဖျက်ပေးဘူးဗျာ…။ ခင်ဗျားဘာလုပ်ချင်လဲ။” ”လူယုတ်မာ…။ နင်ခွေးကျင့်ခွေးကြံမကြံနဲ့ ။ အခုချက်ချင်းပြန်ဖျက်ပေးစမ်း။” ”ခင်ဗျား…. ကျုပ်လီးကိုစုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖျက်ပေးမယ်။ မစုတ်ရင်တော့ဆောရီးပဲ။ ကာယအလှနည်းပြ သေးပေါက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဆိုပြီး အင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်မယ်။ စဉ်းစားပေါ့။ ခင်ဗျားလည်း ဒီအရွယ်တောင်ရောက်နေပြီဆိုမှတော့ အပျိုလည်းမဟုတ်လောက်တော့ပါဘူး။” ကားနောက်ခန်းက စော်ကြီး ခဏငြိမ်သွားသည်။
တအောင့်လောက်နေတော့ ခပ်လေးလေးအသံထွက်လာသည်။ ”မင်းတကယ်ဖျက်ပေးမှာလား။” ”ကျုပ်က ညာပြောစရာလား။ မယုံလည်းနေပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားထိုက်နဲ့ ခင်ဗျားကံပဲ။” ”အေး… အေး…. စုတ်ရုံပဲစုတ်ပေးမှာနော်။ ဒီကိုလာခဲ့။” ”ခင်ဗျားကြီးက လိမ်မာသားပဲ။ ဒီလိုမှပေါ့ဗျ။” ကိုမောင်လေး တစ်ယောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကားနောက်ခန်းကို ကူးသွားသည်မှာ စူပါမင်းထက်ပင်မြန်ဦးမည်။ ကိုမောင်လေး နောက်ခန်းက ခုံမှာ နောက်ကျောမှီထိုင်ရင်း ပေါင်ကိုဖြဲကားပြီး ပုဆိုးကိုလျော့ပေးလိုက်သည်။ စော်ကြီးက ကားကြမ်းခင်းပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ကိုမောင်လေး ပေါင်ကြားထဲမှာ နေရာယူသည်။ ကိုမောင်လေး ရဲ့ ပြေလျော့နေတဲ့ပုဆိုးကြားက လီးကိုထုတ်ကြည့်သည်။ ”အား… နင့်လီးကြီးကအကြီးကြီးပဲဟ..။ ဒါတောင် မတောင်သေးဘူး။” ကိုမောင်လေးလီးက မွေးကာစကလေးလက်သီးဆုတ်လောက်ရှိသည်။ တောင်ရင်ဒီ့ထက်တောင်ကြီးလာဦးမည် ဖြစ်သည်။ ”လီးစုတ်မှာဖြင့်စုတ်စမ်းပါ။ စကားများလိုက်တာ။” စော်ကြီး ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ မတောင်သေးတဲ့ ကိုမောင်လေးရဲ့ လီးပျော့ကြီးကို လက်လေးနဲ့ကိုင်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ကာ စုတ်ပေးတော့သည်။
”အား… ကောင်းလိုက်တာ…။” စော်ကြီး က လီးစုတ်ကျွမ်းကျင်သည်။ ကိုမောင်လေးရဲ့ စံချိန်မီလီးကြီးက ချက်ချင်းပင် မတ်မတ်ထောင်လာတော့သည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ စော်ကြီးပါးစပ်နဲ့ပင် သိပ်မဆန့်ချင်တော့။ ကိုမောင်လေးတစ်ယောက် စော်ကြီးရဲ့ ဆံပင်တွေကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ရင်း ခေါင်းကို ဖိချလိုက် ဖင်ကို ကော့လိုက်နဲ့ စော်ကြီးအာခေါင် အထဲထိရောက်အောင် စုတ်ခိုင်းနေတော့လေသည်။ စော်ကြီးကလည်း အစပိုင်းအင်တင်တင်လုပ်နေပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာမှမပြောတော့ပေ။ ”တော်ပြီ။ လိုးရအောင်…။” ”ဘာ….၊ နင်ပြောတော့ လီးစုတ်ရုံပဲဆို။” ပါးစပ်ထဲက လီးကို ဆွဲချွတ်ရင်း ကမန်းကတန်းပြောသည်။
”ဟိုမှာကြည့်လိုက်…။ ” ကားနောက်ခန်း ခေါင်မိုးပေါ်မှာတပ်ထားတဲ့ စပိုင်ကင်မရာကို လက်ညှိုးထိုးပြရင်းပြောသည်။ ”ဘာလဲ…။ ကင်မရာလား..။” ”ဟုတ်တယ်။ ခင်ဗျားမဆိုးဘူး။ အခု ခင်ဗျား ကျုပ်လီးစုတ်တာတွေကို ကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ပေးမလိုးဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားလီးစုတ်တာတွေပါ အင်တာနက်ပေါ်တင်မယ်။” ”နင်… နင်….. အရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်။ ခွေးကောင်….။” ”ဟားဟား… ၊ အဲဒီခွေးကောင်က ခဏနေရင် ခင်ဗျားကို ခွေးလိုးလိုးမှာ ….။ ”အကျီတွေချွတ်လိုက်စမ်း…။ ဘာမှမချန်ထားပဲ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်တဲ့အထိချွတ်လိုက်….။” စော်ကြီး တုန်တုန်ရီရီနဲ့ အကျီတွေချွတ်သည်။
အကျီပြီးတော့ ဘော်လီ။ နို့ကြီးတွေက ဘော်လီနဲ့မဆန့်လောက်အောင်ပင် တင်းမာဖီးထနေသည်။ ဘော်လီချွတ်လိုက်တော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ထွက်လာသည်။ အသားဖြူလို့ အကြောစိမ်းလေးတွေယှက်သန်းနေတဲ့ စနေနှစ်ခိုင်က တွဲကျမနေပဲ တင်းရင်းလှသည်။ နို့သီးခေါင်းတစ်စုံက ထိပ်ဖျားမှာ ကော့ချွန်နေသည်။ ကိုမောင်လေး နို့ကြီးတွေကိုကြည့်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်ကို လက်နဲ့လှမ်းညှစ်လိုက်သည်။ ”စောက်ကောင်စုတ်…. ငါ့နို့ကို လာမကိုင်နဲ့။” ”စကားမများနဲ့…။ ခင်ဗျား စကပ်ကို ချွတ်စရာရှိတာချွတ်….။” စော်ကြီးက သူ့ကို မီးထွက်မတတ် မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ရင်း စကတ်ကို ဆွဲချွတ်နေသည်။
စကတ်ချွတ်လို့ပြီးတော့ ကိုမောင်လေး ခုံပေါ်မှာထိုင်နေရာကနေ ထလိုက်ပြီး စော်ကြီးကို ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သားနေရာရွေ့နေတုန်း သူ့ဘက်ကို လှည့်လာတဲ့ ဖင်သားအယ်အယ်ကြီးကို လက်နဲ့ ဖြန်းကနဲနေအောင်ရိုက်လိုက်သည်။ ”အား…. နာတယ်…. အကောင်ရဲ့…။ လာမရိုက်နဲ့….။” စော်ကြီးက သူ့ဘက်ကို လှည့်ပြောပြီးနောက် ကားနောက်ခန်းက ထိုင်ခုံမှာ ခပ်လျောလျောထိုင်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပေးနေသည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ်ထောင်ပြီးကားပေးနေတဲ့ စော်ကြီးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်း ကိုမောင်လေးတစ်ယောက် တံတွေးတွေတဂွတ်ဂွတ်နဲ့ မျိုချမိသည်။ စော်ကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးအမှင်တစ်ပင်မှ မရှိပဲ ပြောင်ရှင်းနေပြီး အဆီတွေနဲ့ တင်းအိဖောင်းကားနေခြင်းကြောင့်ပင်…။ ”လှလိုက်တဲ့စောက်ပတ်ကွာ….။” ကိုမောင်လေး အသံထွက်ပြီး ရေရွတ်လိုက်သည်။
”စကားမများနဲ့ လုပ်စရာရှိတာလုပ်..။ ပြီးရင် နင်ရိုက်ထားတာတွေအားလုံးဖျက်ပေး။” ကိုမောင်လေး ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပဲ စော်ကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ”ခင်ဗျားလည်း ကျုပ်လီးကိုစုတ်ရင်း စိတ်တွေကြွနေတယ်ထင်တယ်။ အရည်တွေရွှဲနေတာပဲ။” စော်ကြီးကတော့ ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ မျက်နှာကို ဘေးဘက်လှည့်ထားသည်။ အကြပ်ကိုင်ပြီး လီးစုတ်ပေးနေရတာတောက် စောက်ရည်ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ သူမအဖြစ်ကို ရှက်ရှာမည်ပေါ့။ ကိုမောင်လေး အောက်ကနေ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ လီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ရင်း အရည်တွေ ရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာတေ့ပြီး ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ”အ….. ” စော်ကြီး သူ့အဖုတ်ထဲလီးဝင်သွားတာနဲ့ ခေါင်းကိုမော့ပြီး ငြီးသံထွက်လာသည်။ ”ကောင်းလား….။ ကျုပ်လီးက…။” ဘာမှပြန်မပြော…။ ကိုမောင်လေးဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပဲ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲဝင်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကိုပဲ ခပ်သွက်သွက်အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်တော့သည်။
ဖွတ်… စွတ် …. ဗြွတ် … ဗြွတ်…. အား…. အား…. ရှီး…. ရှီး…… ဆောင့်ချက်တော်တော်လေးရလာတော့ စော်ကြီးရဲ့ လက်တွေက ကိုမောင်လေးလည်ပင်းကို ဖက်တွယ်လာသည်။ ပါးစပ်ကလည်း တရှီးရှီးနဲ့ အသံတွေထွက်လာသည်။ စော်ကြီး သူ့လီးနဲ့ အလိုးခံရတာတော်တော်လေးကောင်းလာမှန်း ကိုမောင်လေးသိသည်။ အရည်တွေ တတောက်တောက်ထွက်နေတဲ့ စော်ကြီး စောက်ဖုတ်က သက်သေပင်မဟုတ်ပါလား။ ကိုမောင်လေး အပေါ်ပိုင်းက တင်းမာဖီးထနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လက်နဲ့ အားရပါးရညှစ်၊ အောက်ကလည်း တင်းကြပ်စီးပိုင်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို အားစိုက်ပြီးလိုးတော့သည်။
အချက်ပေါင်းများစွာ…. ဆောင့်ချက်ပေါင်းများစွာ …. လိုးပြီး စော်ကြီးစောက်ဖုတ်ထဲမှာ လီးကို တစ်ဆုံးနှစ်ရင်း လရည်တွေ တဖျောဖျောနဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ ”အား…. ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကွာ….။” အဖုတ်ထဲမှာ လီးကို စိမ်ထားရင်းပြောသည်။ စော်ကြီးနို့တွေကို လက်နဲ့ ညှစ်ထားတာကိုတော့မလွှတ်သေး။ ”နင်… ငါ့အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လား အယုတ်တမာကောင်….။” ”ခင်ဗျားကျုပ်ကို လရည်မပန်းနဲ့လို့ပြောထားလို့လား။ ကျုပ်ဘာသာကျုပ် ထည့်ချင်ထည့်မှာပေါ့။” ကိုမောင်လေး လီးကို အဖုတ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး ပုဆိုးနဲ့ အကျီကို ပြန်ကောက်ဝတ်သည်။ စော်ကြီးလည်း အကျီတွေ ၊ စကတ်တွေပြန်ဝတ်သည်။
နှစ်ယောက်လုံးဝတ်လို့ပြီးတော့ စော်ကြီးကပြောသည်။ ”နင်ရိုက်ထားတာတွေ ခုချက်ချင်းပြန်ဖျက်ပေး…။” ကိုမောင်လေး ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စော်ကြီးသေးပေါက်တဲ့ မူဗီကိုပြန်ဖျက်ပေးလိုက်သည်။ ”စပိုင်ကင်မရာထဲက ဟာက အခုဘယ်လိုလုပ်ဖျက်လို့ရမှာလဲ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားကျုပ်ကို တိုင်မယ်တောမယ် လုပ်ရင် ကျုပ်ဘက်က ဒါကိုကာဗာယူထားရမယ်။ မဖျက်ပေးနိုင်ဘူး။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့။” ကိုမောင်လေးကားတံခါးကို ဖွင့်ပေးရင်းပြောလိုက်သည်။ ”နင်… နင်….. အင်တာနက်ပေါ်မတင်ရဘူးနော်….။” ”အဲဒါတော့ စိတ်ချ ၊ ကျူပ်မျက်နှာကြီးလည်းပါနေတာ ၊ လုံးဝမတင်ဘူးလို့ကတိပေးတယ်။” ”အေး…. သတိကောင်းကောင်းထား…၊ နင့်ကိုငါလိုက်ရှာပြီး ငါ့နည်း ငါ့ဟန်နဲ့ဆုံးမမယ်။” စော်ကြီး ပွစိပွစိနဲ့ပြောရင်း ကားပေါ်ကဆင်းသွားသည်။ ကိုမောင်လေးလည်း ကားကို ဝူးကနဲမောင်းထွက်ခဲ့သည်။ နောက်ကြည့်မှန်ထဲမှာ သူ့ကားနံပါတ်ကို ဘောပင်နဲ့ရေးမှတ်နေတဲ့ စော်ကြီးပုံရိပ်ကိုမြင်ရသည်။ ကိုမောင်လေး ပြုံးမိသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုထဲမှာ ကားနံပါတ်အတုတပ်ထားတာ ပါတယ်ဆိုတာကို စော်ကြီးမသိလိုက်ခြင်းက ရယ်စရာကောင်းနေသည်မဟုတ်ပါလား….ပြီး